Funda ezi ndlela zokubuyisela ifanitshala yakho kwaye uzihlaziye | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Funda ezi ndlela zokubuyisela ifanitshala yakho kwaye uyihlaziye
Umfanekiso ngo-afgomez unelayisensi phantsi kweCC BY-NC-SA 2.0
Ukubuyisela ifanitshala endala kuyimfashini ngakumbi kunangaphambili. Iindlela zigcwele ngabantu abafuna itafile kagogo endala engafunwa mntu, bayinike ubomi kwaye bayiphucule, bayilungelelanise nexesha lethu langoku. Kwaye yile nto, umhombiso we-eclectic, lowo uxuba izinto zamaxesha ahlukeneyo (njengoko sibonile kule post yangaphambilingumkhwa.
Apha uya kufunda ngeendlela ezahlukeneyo zokubuyiselwa kweenkuni inyathelo ngenyathelo, Ukuhlaziya ezo fenitshala zimbi okanye ezindala ezingasakuxeleli nto. Masiye apho!
1 Ukuthengiswa kwangaphambili kwefanitshala: isanti kunye nokusetyenziswa komcu
2 Ukuzaliswa kwama-pores okanye i-voids
3 Ukufaka isicelo sokutywina ibala
4 Isicelo sedayi
5 Ukugqitywa kokugqibela
Ukuthengiswa kwangaphambili kwefanitshala: isanti kunye nokusetyenziswa komcu
Kuqala, kufuneka siyiphathe ifanitshala ngothotho lwamanyathelo, siyishiye ilungele ukuveza bonke ubuchule kuyo.
Kubalulekile ukwenza olu nyango kakuhle, kuba Nguwo oya kuqinisekisa ukugqitywa kakuhle kwefanitshala.
Okokuqala, kubalulekile ukubona ukuba ifanitshala ayinayo inyoni (Ukuba unemingxunya engaqhelekanga okanye ingxolo ngaphakathi, unokuba unalo olu hlaselo.) Ukusombulula ingxaki, sebenzisa nje imveliso ethile yokuthintela ukhuni.
Ngokwesiqhelo le fenitshala indala inepeyinti kunye nevanishi, izinto ekufuneka sizisusile ukusebenzisa ezethu. Kule nto siza kusebenzisa iindlela ezimbini, isanti kunye nokusetyenziswa komcu.
Isanding: Singasebenzisa i-sandpaper eyahlukeneyo ukwenza eli nyathelo. Ukuba siyisanti ngesandla, iya kuba yinkqubo ebiza kakhulu. Ukugcina ixesha nokwenza ifenitshala ibe ngcono, kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe isander sander. Kuya kufuneka ulumke kakhulu, kuba sinako ukukhubaza ifenitshala yoqobo ukuba siyegqitha. Kuya kufuneka sandise kwicala lokutya okuziinkozo komthi, ukuze sigqibe ngokugqibeleleyo. Kungenzeka ukuba eli nyathelo lanele, kuxhomekeke kumphezulu esiwuphathayo. Ukuba akwanelanga (amaxesha amaninzi kukho ii-nooks kunye neekhenikhi ngaphandle kokufumana isanti), kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe i-stripper.
Ukusetyenziswa komcu: Sisebenzisa iimveliso zeekhemikhali (strippers) ukususa ipeyinti kunye nevarnish kwifenitshala. Kubalulekile ukusebenzisa iiglavu xa usebenzisa ezi mveliso, kunye nokusebenza kwindawo enomoya ngokwaneleyo. Sinokongeza imaski kunye neiglasi zokuzikhusela ezinokuthintela ukucaphuka okunokwenzeka. Zininzi iintlobo zabaphangi. Ezinye zisuswa ngamanzi (lumka, njengokuba iinkuni zingadumba) nezinye ngentlabathi (Ispatula sihlala sisetyenziselwa ukuzisusa). Nje ukuba ifakwe isicelo, kubalulekile ukuba bangomi kwaye bazisuse ngaphambi kokuba kwenzeke oku (umgca ngamnye uya kuba nexesha lesenzo elibonisiweyo kwisitya). Kungafuneka siphinde sandle ukuze sisuse inkunkuma.
«Umthi-wezandla» ngu-JOSE-MARIA MORENO GARCIA = UMFOTO WABANTU unelayisensi phantsi kwe-CC BY-NC-ND 2.0
Ukuzaliswa kwama-pores okanye i-voids
Ke kulula ukusebenzisa i-filler, ukugcwalisa imingxunya emithini (oku kuyimfuneko ukuba inezikroba ezinkulu kakhulu, eziya kuxhomekeka kuhlobo lomthi esiwunyangayo). Ubunzima be-pasty, esiza kuyisebenzisa ngoncedo lwebrashi kwaye sisuse usebenzisa i-spatula.
Ukufaka isicelo sokutywina ibala
Ukusebenzisa isicatshulwa se-stain kuya kusasaza ibala ngokulinganayo phezu komhlaba, akunjalo kunye neentlobo ezininzi zeenkuni, ezithatha ibala kakhulu kwaye zihlala zimnyama kakhulu. Kukulungele ukwenza isanti kancinci emva kokumisa, ukuze iinkuni zifane ngokufanayo.
Ngoku sinokusebenzisa idayi. Kukho iidayi ezisetyenziswa ngaphambi kokufaka, ke kufuneka sifunde imiyalelo. Idayi inokuba njalo ulwelo (kokukhona sifaka, kuya kuba mnyama ukugqitywa) okanye uhlobo lwejeli. Kukwakho nazo isiseko seoyile o manzi.
«Isalone-mobile-milano-2018-franco-furniture» nguMueble de España / Ifenitshala evela eSpain inelayisensi phantsi kweCC BY-NC-SA 2.0
Kukho iindlela ezahlukeneyo zokugqiba ifanitshala:
Laca. Kufuneka itshizwe ngefanitshala.
Ivanishi. Ikwabizwa ngokuba yi-polyurethane, kufuneka ifakwe kwimigca emincinci ngebrashi.
Ioyile. Kukulungele ukulungisa ngokulula imikrwelo yexesha elizayo, kunye nesicelo esilula. Ayikhuseli ngokungathi ezinye zimbini.
Emva koku sinokusebenzisa i ibala, eya kuthi inike ifanitshala yethu ukhuseleko ngakumbi kunye nesiphelo esihle esihle.
Kukwakho neendlela ezahlukeneyo onokuzisebenzisa, ezahlukileyo kukudaya okanye ukuncedisana: ukusetyenziswa kwezincamathelisi, ukusetyenziswa kwe-decapé ...ubuchule ekutyeni abunamida, ulinde ntoni ukuqala?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Amaqhinga » Funda ezi ndlela zokubuyisela ifanitshala yakho kwaye uyihlaziye
Iigundane ezinxibe imaski ezibhankini zingena eLondon phantsi komhlaba